Computer | Great Arakan
Home Tech Computer
ကျော်ဝင်း ခိုင် - May 8, 2021
ကျော်ဝင်း ခိုင် - April 26, 2020
Computer ကျော်ဝင်း ခိုင် - April 26, 2020 0
https://www.slideshare.net/HarrySurden/harry-surden-artificial-intelligence-and-law-overview Published on Oct 20, 2017 Presentation of Harry Surden on Artificial Intelligence and Law at Texas A&M University Law School QuestionsHarry SurdenAssociate Professor of LawUniversity of...
Computer ကျော်ဝင်း ခိုင် - April 23, 2020 0
နည်းပညာတိုးတက်တေ ခေတ်မှာ ပိတ်ထားရေ ဝပ်ဆိုက်တိကို ဖွင့်ကြည့်ဖို့ အလွယ်ချေပါ။ VPN နန့် ဖွင့်ကြည့်စွာတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါဖို့။ ယကေလည်း ရှုပ်ထွေးခက်ခဲစွာတိကို မပြောဘဲ၊ အလွယ်ကူဆုံး နည်း ၂ မျိုးကို ပြောပြပါမေ။ ၁) Google Translate သုံးနည်း အမှန်က Google Translate...
Computer ကျော်ဝင်း ခိုင် - April 21, 2020 0
မိန်း - ယူနီကုတ်(Unicode) ဆိုစွာ ဇာလဲ? ဖြေ - ယူနီကုတ်ဆိုစွာ အများထင်နိန်ကတ်တေပိုင် ဖင့်(စာလုံး) တမျိုးမျိုးကို ပြောစွာ မဟုတ်ပါ။ အရွီးအသားတိဖြစ်တေ စာလုံး၊ အက္ခရာ၊ အမှတ်အသားတိကို လူအများသုံး ဘုံဖြစ်လာအောင် Unicode Consortium က ချမှတ်ထားရေ စံထားအတိုင်း သင်္ကေတ...
တချိန်တည်း လူ ၁၀၀ ထိ ဗီဒီယို အစည်းအဝေး လုပ်နိုင်ရေ Zoom
Computer ကျော်ဝင်း ခိုင် - April 1, 2020 0
ကိုရိုနာဗိုင်းရာ့ဆ် တစတစပြန့်လာစွာနန့် နိုင်ငံကြီးတိမှာ ရုံးတိကို ပိတ်ပနာ၊ အိမ်ကရာ အလုပ်လုပ်ဖို့ အတင်းအားဓမ္မ တိုက်တွန်းလာပါရေ။ ယင်းပိုင်အနိန်အထားမှာ အိမ်က အလုပ်လုပ်ယင်း၊ ရုံးမှာပိုင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တိနန့် မိန်းမြန်းဆွေးနွေးဖို့ ကြားခံမီဒီယာတခု မရှိမဖြစ်လိုလာပါရေ။ အယင်ရှိဗြီးသား Viber, Messenger, WhatsApp ရို့က တယောက်ချင်းစီကို ရုပ်သံဗီဒီယို...
ကိုယ့်ဖုန်းက ကိုယ့်ကို ပြန်ထောက်လှမ်းနိန်ရေ
Computer ကျော်ဝင်း ခိုင် - July 25, 2019 1
ညဇာက အရေးကြီးရေ ကိစ္စတခု တိုင်ပင်ချင်လို့ Messenger က မတ်ဆေ့ချ် ပို့ရေ။ ပို့ရေ စာတိကို သူက Like လုပ်တေ။ တခုလည်း စာ မပြန်။ အေဟင့်စွာ ပုံမှန် မဟုတ်မှန်း၊ တယောက်ယောက် သူ့အကောင့်ကို ဝင်ဖောက်နိန်မှန်း သိလိုက်တေ။ ယင်းအတွက်နန့်...
Computer ကျော်ဝင်း ခိုင် - May 21, 2019 0
အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ဖိအားပီးလာရေအတွက် ဝါဝေ(Huawei) နန့် အပြန်အလှန် နည်းပညာထောက်ပံ့ရေး သဘောတူညီမှုတိနန့် ခွင့်ပြုချက် လိုင်ဆန်တိ ရယူထားကတ်ရေ အမေရီကန်ကင်ပဏီတိက အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်မှုတိ လုပ်လာပါရေ။ ယင်းအထဲမှာ ဂိုဂဲလ်(Google) ကုမ္ပဏီက ပထမဆုံး ဖြစ်တေအတွက်၊ နောက်ထုတ်တေ ဝါဝေ ဖုန်းအသစ်တိမှာ ကဗာမှာ...
Computer ကျော်ဝင်း ခိုင် - April 21, 2019 0
ကဗာ့အကြီးဆုံး ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ကင်ပဏီ ဝါဝေ(Huawei)က၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်(CEO) ရန် ဇန်ဖိုင်း(Ren Zhengfei)က တရုတ်နိုင်ငံနန့် နည်းပညာပြိုင်ဆိုင်စွာမှာ၊ ဖိုင်းဂျီ(5G) နည်းပညာကို အမေရီကန်သမ္မတ ဒိုနဲလ် ထရုန့်ပ် က နြူးကလီးယားဗုံးပိုင် သဖောထားရေလို့ ပြောလားပါရေ။ ဂျာမဏီနိုင်ငံနန့် "သလျှိုထောက်လှမ်းမှု မလုပ်ရေး သဘောတူညီချက်" (“no-spy...
Computer ကျော်ဝင်း ခိုင် - March 18, 2019 0
အလီးအများကြီး မ,နိုင်ရေ ဒရုန်းဆိုစွာဇာလဲ? ပုံမှန် ဒရုန်းတိက အလီးချိန် ၂ ပေါင် ကနိန် ၄ ပေါင် လောက်ထိရာ မ,နိုင်ကတ်ပါရေ။ အလီး အများကြီး မ,နိုင်ရေ ဒရုန်းဆိုစွာ အလီးချိန် ၁၀ ပေါင် အထက် မ,နိုင်ရေ ဒရုန်းတိကို ရည်ညွှန်းပါရေ။ အများပြည်သူတိ...
ဝါဝေကို ပိတ်ပင်ရေ နောက်ပိုင်း၊ ဆီလီကွင်တောင်ကြားမှာ တရုတ်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအားလုံး ရပ်ဆိုင်းလားဖို့
Computer ကျော်ဝင်း ခိုင် - January 27, 2019 0
တရုတ်နိုင်ငံက အကြီးဆုံး ဆက်သွယ်ရေးကင်ပဏီ ဝါဝေ(Huawei)ကို အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုနန့် အနောက်အုပ်စုက စီးပွားရေးပိတ်ပင်လာရေအတွက်၊ အမေရီကန်ပြည်ထောင်စုက အဆင့်မြင့်နည်းပညာဇုံ ဆီလီကွင်တောင်ကြား(Silicon Valley)မှာ တရုတ်နိုင်ငံက ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းလားဖို့လို့၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံက ဒါဗိုဆ်(Davos)မြို့မှာ ကဗာ့စီးပွားရေးညီလာခံ(World Economic Forum (WEF)) တက်ဖို့ ရောက်နိန်ရေ၊ တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ်(People’s Bank...
ဘဲ့တ်ကွိုင်း တန်ဖိုး အယင်နှစ်ကထက် ၈၀% ထိ ထိုးကျလား
Computer ကျော်ဝင်း ခိုင် - December 5, 2018 0
ဒဲ့ဂျစ်တဲလ်ဖေသာတိ အထဲမှာ နာမေအကြီးဆုံး ဖြစ်တေ၊ ဘဲ့တ်ကွိုင်း(bitcoin) ၁ ခတ် တန်ဖိုးစွာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ အမေရီကန်ဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀ လောက် ရှိခစွာထက်၊ အဂု ၃,၈၀၀ လောက်ကို ထိုးကျလားပါရေ။ တခြား ခြစ်ပတိုကာရမ်စီ(cryptocurrencies) ရဲ့ပ်ပဲလ်(ripple)နန့် အီသီရီယင်(ethereum) တန်ဖိုးတိလည်း သိသိသာသာ...